ဒီနေ့ကစပြီး သိန်း( ???? ) ကို ဆက်တိုက်လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်လို့ အရမ်း‌ပျော်ရွှင်ကာ တက်ကြွ‌နေတဲ့ နေခြည်ဦး – Maythadin
ဒီနေ့ကစပြီး သိန်း( ???? ) ကို ဆက်တိုက်လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်လို့ အရမ်း‌ပျော်ရွှင်ကာ တက်ကြွ‌နေတဲ့ နေခြည်ဦး
May Thadin | November 17, 2020 | Celebrity | No Comments
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချောလေး နေခြည်ဦးကတော့ အနုပညာလောကမှာ တောက်ပလာတဲ့ကြယ်ပွင့်လေးတစ်ပွင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်။နေခြည်ဦးက သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့လည်း ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံပြီး အမြဲပျော်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နေခြည်ဦးက ပွင့်လင်းစွာပြောဆိုတတ်ပြီး သွက်သွက်လက်လက်နဲ့အရမ်းတက်ကြွလွန်းသူဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေက သူမကိုချစ်မဝဖြစ်နေကြတာပါနော်။နေခြည်ဦးက လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်တော့ ရတနာဆိုင်တွေအတွက် Liveလွှင့်ပြီးရောင်းချပေးနေသလို သူမကိုယ်တိုင်လည်း
ရတနာတွေဝယ်စုနေတာဖြစ်ပါတယ်။နေခြည်ဦးက လူငယ်ပီပီ စတိုင်လ်ခပ်မိုက်မိုက်လေးနေတတ်ပြီး ခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့အညီဖက်ရှင်ကျစွာ ဝတ်ဆင်တတ်ပါတယ်နော်။နေခြည်ဦးက သူမရဲ့တစ်နေ့တာလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုလည်း အမြဲမပြတ်မျှဝေပေး
လေ့ရှိပြီး ဘယ်အကြောင်းကိုအရာမဆို အရမ်းပွင့်လင်းတာဖြစ်ပါတယ်။နေခြည်ဦးက သူမကိုယ်တိုင်လည်း သိန်းရာချီတန်တဲ့အသုံးအဆောင်တွေကို ဝယ်ယူတတ်သလို အပေးအကမ်းလည်းအရမ်းရက်ရောပါတယ်နော်။အခုဆိုရင်လည်း နေခြည်ဦးက ဒီနေ့ကစပြီး
နောက်ရက်ဆက်တိုက်တွေအထိ သိန်း(၁၀၀၀)ကို လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နေခြည်ဦးက အလှူအကြီးကြီးလုပ်ရတော့မှာဖြစ်လို့ အရမ်းတက်ကြွပြီး ပျော်ရွှင်နေတဲ့အကြောင်းလေးကို ပရိသတ်တွေအတွက် မျှဝေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်။
ပရိသတျကွီးရေ မငျးသမီးခြောလေး နခွေညျဦးကတော့ အနုပညာလောကမှာ တောကျပလာတဲ့ကွယျပှငျ့လေးတဈပှငျ့ဖွဈပါတယျနျော။နခွေညျဦးက သူ့ရဲ့ပရိသတျတှနေဲ့လညျး ရငျးရငျးနှီးနှီးဆကျဆံပွီး အမွဲပြျောအောငျလုပျပေးတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျပဲဖွဈပါတယျ။
နခွေညျဦးက ပှငျ့လငျးစှာပွောဆိုတတျပွီး သှကျသှကျလကျလကျနဲ့အရမျးတကျကွှလှနျးသူဖွဈလို့ ပရိသတျတှကေ သူမကိုခဈြမဝဖွဈနကွေတာပါနျော။နခွေညျဦးက လကျရှိအခြိနျမှာဆိုရငျတော့ ရတနာဆိုငျတှအေတှကျ Liveလှငျ့ပွီးရောငျးခပြေးနသေလို သူမကိုယျတိုငျလညျး
ရတနာတှဝေယျစုနတောဖွဈပါတယျ။နခွေညျဦးက လူငယျပီပီ စတိုငျလျခပျမိုကျမိုကျလေးနတေတျပွီး ခတျေရစေီးကွောငျးနဲ့အညီဖကျရှငျကစြှာ ဝတျဆငျတတျပါတယျနျော။နခွေညျဦးက သူမရဲ့တဈနတေ့ာလှုပျရှားမှုမှနျသမြှကိုလညျး အမွဲမပွတျမြှဝပေေး
လရှေိ့ပွီး ဘယျအကွောငျးကိုအရာမဆို အရမျးပှငျ့လငျးတာဖွဈပါတယျ။နခွေညျဦးက သူမကိုယျတိုငျလညျး သိနျးရာခြီတနျတဲ့အသုံးအဆောငျတှကေို ဝယျယူတတျသလို အပေးအကမျးလညျးအရမျးရကျရောပါတယျနျော။အခုဆိုရငျလညျး နခွေညျဦးက ဒီနကေ့စပွီး
နောကျရကျဆကျတိုကျတှအေထိ သိနျး(၁၀၀၀)ကို လှူဒါနျးသှားမှာဖွဈပါတယျ။နခွေညျဦးက အလှူအကွီးကွီးလုပျရတော့မှာဖွဈလို့ အရမျးတကျကွှပွီး ပြျောရှငျနတေဲ့အကွောငျးလေးကို ပရိသတျတှအေတှကျ မြှဝလောခဲ့တာဖွဈပါတယျနျော။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်​ သမီးလေးစံထိပ်ထားဦးနဲ့ ညီအစ်မလို့​တောင်​အထင်မှားရလောက်အောင် နုပျိုလွန်း​နေ​သောမင်းသမီးကြီး ခိုင်သင်းကြည်
ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ ကလေးယူဖို့အတွက် အစီအစဉ်ရှိမရှိဆိုတာကို ပြောပြလာခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဥက္ကာမင်းမောင်ရဲ့ (ရုပ်​သံဖိုင်​)
ကိုယ်တိုင်လည်း အဆင်မပြေတဲ့ကြားထဲက​နေပြီး ချို့တဲ့သူတွေအား အမြဲတမ်းလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် ရဲလေးမ
ကိုဗစ်​ကူးစက်ခံထားရရှာတဲ့ ဖခင်ဦးမိုးဒီမှာ ရောဂါအခံများရှိတာကြောင့် အင်မတန်​​​​စိတ်ပူမိတယ်လို့ ဖွင့်ဟလာခဲ့တဲ့ သားဖြစ်သူ ကောင်းစံရဲ့ (ရုပ်​သံ)